မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ဖုန်း မှား သွား လို့
ဖုန်း မှား သွား လို့
“မဟုတ်ပါဘူးရှင်… ကျွန်မက ဒီအိမ်က အိမ်ဖော်ပါ”
… “သြော်… အေးအေး… မင်းမမလေးကော…. ရှိလား”
“..ရှင်… မမလေးက သူ့အမျိုးသားနဲ့ အိပ်နေတယ်.. မခေါ်ပေးရဲဘူး”
“ဒီမှာငါကမှ.. သူ.ယောင်္ကျား… မှတ်ထား.
ကောင်မက တော်တော် လင်ပေါနေတယ် မှတ်တယ်…
ခု လင်ငယ်နဲ့ အိပ်နေတယ်ပေ့ါ………
ဟေ့… ဟေ့.. ဒီမှာ… မင်းအခုချက်ချင်း အခန်းထဲဝင်ပြီး.. ကောင်မကိုကော အကောင်ကိုကော.. သတ်ပစ်စမ်းကွာ..”
“ရှင်..!!!! … မ… မ.. လုပ်ပါရစေနဲ့ရှင်”
“တောက်… နင်ပါသေချင်လို့လား… ငါအခုပြန်လာလိုက်ရ.. ၃ လောင်းပြိုင်ဖြစ်သွားမယ်… နားလည်လား..သွားစမ်း သွားစမ်း
ကြားလား… ဖြစ်သမျှငါရှင်းမယ်.. သွားပစ်လိုက်စမ်း”
“ဟိုလေ ဒီလေလုပ်မနေနဲ့.. ဘာလဲ.. နင်ပါသေချင်လို့လား”
ခဏအကြာ…. ဒိုင်းခနဲသေနတ်သံနှစ် ချက်ကြားလိုက်ရသည်။
“ပြီး..ပြီးပြီ.. ဘာ.. ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဟင်…..”
“အေး…ပြီးရင်.. ဂုန်နီအိတ်နဲ့ထုပ်ပြီး… အိမ်ရှေ့ယူလာခဲ့
“ပြီးရင်…. အိမ်ရှေ့က ရေကန်ထဲ ခဏချထား… ငါပြန်လာမယ်… ကြားလား”
“ရေကန်ဟေ့… ရေကန်… နားလေးနေလား.. ငါဒေါသထွက်နေရတဲ့အထဲ”
“ဟို..ဟိုလေ… အိမ်ရှေ့မှာရေကန် မရှိဘူးရှင့်”
“ဒါ..ဒါဖြင့် phone နံပါတ်ကကော.. ဟင်…”
“09 ... ... ... ... လေ….”
“ဗျာ…… အဟင်း.. ဘယ်လိုပြောရမလဲ….. sorry့ နော်…….
ဟို.. ဟိုလေ… ဟို..ဗျာ… ဟို… phone မှားသွားလို့…..ဗျ…. ဟုတ်…… ဒါပဲနော်”….
Author MSSK at 2:12:00 PM